युट्युबको रोयल्टी कसको ? – Mero Film
युट्युबको रोयल्टी कसको ?
२०७४ चैत २० गते १०:३२
सार्वजनिक यातायातमा गीत बजाएबापत रोयल्टी उठाउने नियम लगाइरहँदा ठूलो राशिमा कारोबार हुने डिजिटल प्लेटफर्म युट्युब भने रोयल्टीको दायरामा आउन सकेको छैन ।
साथीभाइका कमेन्ट हेरेपछि शिव थप आश्चर्यमा परेका छन् । ‘म मात्र होइन, म्युजिक नेपालले सबैलाई मारमा पारेको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो गीत हामीले हाम्रै च्यानलमा अपलोड गर्दा हामीमाथि नै कन्टेन्ट क्लेम हुन्छ । मैले जिन्दगीमा कहिल्यै म्युजिक नेपालसँग काम गरेको छैन । मेरो गीत कसरी उससँग पुग्यो ?’ म्युजिक नेपालले आफ्नो युट्युब च्यानलमा सन् २०१६ सेप्टेम्बर १० मा ‘द एक्स ब्यान्ड नेपाली एभरग्रिन पप सङ्स’ भन्दै अडियो जुक बक्स अपलोड गरेको छ । त्यसमा यो सातासम्म २ लाख १९ हजारभन्दा बढी भ्युज भइसकेको छ । ब्यान्डका ‘लुक्न देऊ मलाई तिम्रो केसमा…,’ ‘चिया बारीमा…’, ‘ठाडो जाने उकाली…,’ ‘तिम्रो नजरले…,’ ‘प्राय: सधैं म…’ जस्ता लोकप्रिय गीत जुक बक्समा छन् । नारायण गोपाल, तारादेवी, अरुण थापा, उदितनारायण झा, डेनी डेङ्जोङ्पा, झलकमान गन्धर्वदेखि नवीन के भट्टराई, अञ्जु पन्त, राजु लामा, रामजी खाँड, प्रमोद खरेल सबैका गीत संकलन गरेर अडियो वा भिडियो जुक बक्स बनाइएको छ । ती सबैमा लाख बढी भ्युज छन् ।
म्युजिक नेपालको च्यानलमा भएका गीत अन्य च्यानलले अपलोड गर्न चाहे युट्युबले मान्दैन । यसको सब्स्कि्रप्सन र भिडियो भ्युज धेरै भएकाले कलाकारको व्यक्तिगत च्यानलभन्दा म्युजिक नेपाललाई युट्युबले आधिकारिक मान्छ । यसरी आफ्नो गीत आफैंले चलाउन नपाएपछि कलाकारहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
सन् २०११ मा युट्युब च्यानल खोलेको म्युजिक नेपाल अहिले नेपालको सबैभन्दा बढी सब्स्क्राइबर भएको च्यानल हो । युट्युबको तथ्यांक राख्ने सोसलब्लेड डट कमका अनुसार सोमबारसम्म यसको झन्डै १७ लाख सब्स्कि्रप्सन हुनुका साथै १ अर्ब ५७ करोड ९० लाख ५ हजार ५ सय २२ भिडियो भ्युज थियो । कम्पनीले मासिक १३ लाखदेखि साढे २ करोडसम्म आम्दानी गर्ने सोसलब्लेडको अनुमान छ । ‘आर्टिस्टहरू यस्तो युट्युब जायन्टसँग लड्न डराइरहेका छन्,’ एक्स ब्यान्डका शिव भन्छन्, ‘यता आफ्नो च्यानलमा वाचिङ आवर नपुगेर भिडियो मोनिटाइज गर्न सकिएको छैन, उता कम्पनीले गीत खर्लप्पै खाइसक्यो ।’
लोभलाग्दो भ्युज र सब्स्कि्रप्सन भएका कुनै पनि च्यानलले युट्युबबाट प्राप्त रेमिट्यान्स रोयल्टी कलाकर्मीसँग सेयर नगरेको संगीत रोयल्टी संकलन समाजका महासचिव महेश खड्काले बताए । ‘हामीले सन् २०१६ मा युट्युबसँग सम्झौता गरेका थियौं,’ रोयल्टी संकलन समाजकी सीईओ मीनाक्षी कोइराला भन्छिन्, ‘मनिटाइजको प्रक्रियामा आउन समय लाग्छ भनेका छन् । यो नभएसम्म क्रिएटिभ रोयल्टी पाइँदैन ।’
म्युजिक नेपाल र सङ्स नेपालजस्ता च्यानल भने आफूले रोयल्टी वितरण गर्दै आएको दाबी गर्छन् । म्युजिक नेपालका थापाले निरन्तर रोयल्टी बुझाउँदै आएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘कम्पनी वा वनर प्रोड्युसरलाई युट्युबको रोयल्टी दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कन्टेन्ट आईडी क्लेमको कुराचाहिँ युट्युबको सिस्टमले गर्दा हो । हामीलाई सम्पर्क गरे कुरा सजिलै सेटल भइहाल्छ ।’ सङ्स नेपालका भिडियो म्यानेजर अदुल मानन्धर पनि प्रत्येक तीन महिनामा रोयल्टी बुझाउने गरेको बताउँछन् । सर्जक र म्युजिक नेपालबीच ५०–५० प्रतिशतमा सम्झौता हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
साभार : कान्तिपुर दैनिक/सजना बराल